မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ဘာ ပေးကြမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ဘာ ပေးကြမလဲ
မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ဘာ ပေးကြမလဲ
Posted by မောင် ပေ on Jun 10, 2011 in Creative Writing | 10 comments
တစ်ရက် က ဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော့်အနေ ဖြင့် မင်္ဂလာဆောင် ၂ ခု သွားရန် ဖြစ်လာသည် ။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အခက်ကြုံ ရသည်မှာ မင်္ဂလာဆောင် ၂ ခု သည် တစ်မြို့ စီ တွင် ဖြစ်နေသည် ။ သို့ နှင့် ၂ခု လုံး ကို သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်သည့်အတွက် မည်သူ့ မင်္ဂလာဆောင် ကို သွားရမည် ကို ရွေးခြယ်ပြီး မသွားနိုင်သည့် မင်္ဂလာ ဆောင် အတွက် သွားမည့် သူငယ်ချင်း ကို ကိုယ်စား လက်ဖွဲ့ ပေး ပေးပါရန် အကူအညီ တောင်းလိုက်သည် ။ သို့ နှင့် မင်္ဂလာဆောင်များ ပြီးသွားပြီး နောက်နေ့အကူအညီတောင်းထားသည့် သူငယ်ချင်း ကို တွေ့ သောအခါ လက်ဖွဲ့ ခိုင်းလိုက်သည့် ပိုက်ဆံ ပြန်ပေး မလို့ မေးကြည့်သော အခါ မဖွဲ့ ခဲ့ဘူး တဲ့ ။ သူ ရောက်သော အချိန် မှာ မင်္ဂလာပွဲ အပြီး မို့ ကျွန်တော် ဖွဲ့ ခိုင်းလိုက်သော ပိုက်ဆံ ကို လူချင်း ပေးရမှာ မကောင်းလို့ မဖွဲ့ ခဲ့ပါတဲ့ ။ အမှန်မှာ အကူအညီတောင်းလိုက်သည့် သူငယ်ချင်း က ပိုက်ဆံ လက်ဖွဲ့ သည် ကို သဘောမကျ သော သူ ဖြစ်သည် ။ မင်္ဂလာဆောင်သော သူငယ်ချင်း မှာလည်း ပိုက်ဆံ ချမ်းသာသော သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အတွက် သူ က ပိုက်ဆံ မလို ဟု ဆိုလာသည် ။ ထိုနှင့် ကျွန်တော့်မှာ လက်ဖွဲ့ မပေးလိုက်ရသည့် အတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ကာ စဉ်းစားမိသည် ။ မင်္ဂလာ ဆောင် လက်ဖွဲ့ အကြောင်း ။ ချစ်ကြ ကြိုက်ကြ ချစ်သူဘဝ ၏ လမ်းဆုံး သည် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခြင်း ။ မည်သည့် ချစ်သူ နှစ်ဦး မဆို မင်္ဂလာဆောင် ကြရန် စိတ်ကူး ကြိုးစားနေကြမည် သာ ။ အချို့ သတို့ သား သတို့ သမီး တို့ သည် ပိုက်ဆံ တတ်နိုင်သဖြင့် လက်ဖွဲ့ ကိစ္စ ကို သိပ် ဦးမစားကြ ။ အချို့ သော သူများ မှာ မူ မတတ်နိုင်ကြ ။ မင်္ဂလာဆောင် ရသည် ကို ပင် မဆောင်လျှင် သတို့ သမီး အတွက် မတင့်တယ် လို့ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ နည်းဖြင့် ကြိုးစားထားကြသော မင်္ဂလာ ဆောင်မျိုး ။ အဲဒါ ထားပါ ။ မင်္ဂလာဆောင် ကို သွားမည် ဆိုလျှင် မည်သူ မဆို လက်ဖွဲ့ ကြမည်သာ ။ တတ်နိုင်လျှင် တတ်နိုင်သလို တိုက်တာအိုးအိမ် ၊ ရွှေငွေ အသုံးအဆောင် စသည်ဖြင့် လက်ဖွဲ့ ကြမည် ။ ကျွန်တော့် အနေဖြင့် သိပ်မခင်သည့် အသိမိတ်ဆွေ မျိုး မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်လာလျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ် ခန့် ပုံမှန် လက်ဖွဲ့ လေ့ရှိသည် ။ ကိုယ်လည်း ဒီလောက်တတ်နိုင်တာကိုး ။ စဉ်းစား မိသည် မှာ မင်္ဂလာဆောင်ကြသည့် သတို့ သား သူတို့ သမီး တို့ အနေဖြင့် နေစရာ တိုက်အိမ် က တော့ ထားပါတော့ ။ သတို့ သား သတို့ သမီး အိပ်ခန်းအသုံးအဆောင် လောက် ကတော့ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ကြမည် ဖြစ်သည် ။ ဥပမာ ကုတင် ၊ မွေ့ ယာ ၊စောင် အစရှိသဖြင့် ။ မီးဖိုသုံး ပစ္စည်းများ ကို လည်း စုဆောင်းပြီး ကြ ဖြစ်မည် ။ သို့ ဆိုလျှင် မင်္ဂလာဆောင်တွင် ထိုပစ္စည်းမျိုး ကို လက်ဖွဲ့ လျှင် သူတို့ အတွက် ပိုနေပေတော့မည် ။ ပေါင်းအိုး၊ မီးပူ ၊ နာရီ စသည်ဖြင့် ပေါ့ ။ အကယ်လို့မင်္ဂလာဆောင် လက်ဖွဲ့ သူတိုင်းသာ ထိုပစ္စည်းမျိုး များသာ လက်ဖွဲ့ ကြမည် ဆိုလျှင် သူတို့ အတွက် ပို နေပေတော့မည် ။ ပိုသည့် ပစ္စည်းများ ကို ရောင်းမည် ဆိုလျှင် လည်း ဈေးနှိမ်ခံ ရမည် ။ ငွေတော့ ရမှာပေါ့ ။ သို့ ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံ ဖွဲ့ မည် ဆိုလျှင်… ဥပမာဗျာ ကိုယ်က တစ်သောင်း တတ်နိုင်လို့ တစ်သောင်းတန် ထမင်းပေါင်းအိုး သို့ နာရီ ဖွဲ့ လိုက်ပြီ ဆိုပါတော့ ။ ကိုယ်ဖွဲ့ လိုက်သော အရာသည် သူတို့ အတွက် ပိုနေလို့ ပြန်ရောင်းလျှင် တစ်သောင်း မရနိုင်ပါ ။ ကိုယ် က တတ်နိုင်လို့ အဲကွန်း အဝတ်လျှော်စက် ဖုန်စုပ်စက် မျိုး လက်ဖွဲ့ ခဲ့လျှင်တော့ သူတို့ လက်တွေ့ သုံးမည်မှာ သေချာသည် ။ သို့ သော် ကိုယ် က မှ မဖွဲ့ နိုင်တာ ( မဖွဲ့ ချင်လို့ ဟု ပြောလာခဲ့လျှင်လည်း လက်ခံပါမည် ။ ကိုယ်မှ မတတ်နိုင်တာ ) ။ ကိုယ်ဖွဲ့ နိုင်သလောက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ငွေသားအဖြစ် ဖွဲ့ လိုက်မည် ဆိုလျှင် သူတို့ သား သူတို့ သမီး အတွက် ပို အဆင်ပြေမည် ဟု ထင်မိသည် ။ ငွေရေးကြေးရေး မတတ်နိုင်ပဲ မဆောင်မဖြစ်လို့ ဆောင်ကြရသည့် အတွဲ များ အတွက် ဆိုလျှင် အရမ်းကောင်းသွားမည်…ငွေသားလက်ဖွဲ့ ပေးခြင်းအားဖြင့် ။ ငွေရေးကြေးရေး တတ်နိုင်သည့် အတွဲ များ အတွက်ကော…. မင်္ဂလာဆောင်စားရိတ်ကလေး ပြန်မရပေဘူးလား ။ အနည်းဆုံး မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ဘက်ချလာ နိုက် ဆိုတာ အတွက် သုံးစရာ ငွေ မရပေဘူးလော ဟု စဉ်းစားမိသည် ။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာ များသည် ကျွန်တော် စိတ်ကူးမိသည် များသာ ဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ ကျွန်တော် နှင့် စိတ်သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်ကြသည် ရှိခဲ့သော် ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါသည် ။ မင်္ဂလာဆောင်ကြသည့် သတို့ သား သတို့ သမီး များ နေရာ ကို ဝင် ကိုယ်ချင်းစာ ခံစားကြည့်ပြီး ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ဟဲဟဲ နှစ်ခု စလုံးလက်ခံပါတယ် ဟိဟိ…. ဒါကတော့ အရင်ထဲက လက်ဖွဲပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်ပြီးယူသွားလိုက်လည်း ဖြစ်တာပဲလေ…
အသိတယာက်က မင်္ဂလာဆောင်တွေက ပြန်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေ အတွင်းဈေးနဲ့ကောက်တဲ့
အလုပ်လုပ်တယ် …. ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးမှု သူတို့အဃြေအနေကြည့်လို့ပေါ့လေ။
အလုပ်လုပ်တယ် …. ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးမှု သူတို့အခြေအနေကြည့်ပြိးတော့ပေါ့လေ။
နယ်က အသိတယောက်ဆို သူတို့ ဆီမှာ အချိုစုံ (ပန်ကန် နဲ့ ဇွန်း ဘူးနဲ့ ထည့်ထားတာ) ရောင်းတာ တစုံကို ၁၅၀၀ လောက်ပဲ ကျတယ်။ မင်္ဂလာ ဆောင်ရှိတယ် ဆို လူတွေက သူ့ဆိုင်မှာ ပြေးပြေးပြီး လာဝယ်ကြတယ်။ သတိုးသား သတိုးသမီးက စိတ်ညစ်တယ် အချိုစုံတွေ ကြီးပဲ ရလို့..
အဲဒီ အရပ်ကလည်း ဆင်းရဲတော့ ဒီလောက် ပဲ တတ်နိုင်တော့ ၁၅၀၀ လောက်နဲ့ ပါကင် ဗူး နဲ့ ရတယ် ဆိုတော့ မျက်နှာပန်း လှတယ်လေ..
အဲဒီ အသိဆိုင်က အဟောင်းမကိုင်ဘူး ဆိုတော့.. သူ့ဆိုင်က လူတွေ ၀ယ်ပြီး လက်ဖွဲ့.. ပြီးတော့ မင်္ဂလာ မောင်နှံ လာပြီး ပြန်ရောင်း မ၀ယ် ဆိုတော့ တခြား ဈေးနိမ်တဲ့ ဆိုင်မှာ ထိုးအပ်ပြီး ရောင်း.. သနားတော့ သနားပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မင်္ဂလာဆောင်က ကြွေပန်းကန် လုပ်တဲ့ တရုတ်ကြီး ရယ် အချိုစုံ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ရယ် ပေါင်းစားသွားတာပါပဲ။
ယူအက်စ်က မင်္ဂလာဆောင်တွေကတော့.. ချက်လာက်မှတ်(ငွေ) လက်ဖွဲ့ တာများတယ်..။
ပစ္စည်းတွေဆိုလည်း.. ရီတန်း(ပြန်ပေး) လို့ရအောင်.. ၀ယ်တဲ့လက်ဆောင်စလစ်လေးပါ လက်ဆောင်အိပ်ထဲ… ထည့်ပေးလိုက်ကြတယ်..။
အ၀တ်အစားဆိုရင်တော့… ကိုယ်နဲ့တော်တာလည် ပြန်လဲလို့ရတာပေါ့..။ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့နော…။
မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ ဖို့.. ဆူပါမားကက်မှာလည်း.. သတို့သား၊သမီးက.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ.. ဘွတ်ကင်လုပ်ထားတာလည်း ရှိတယ်..။
လက်ဖွဲ့ပေးမဲ့သူက.. အဲဒီသွားပြီး..လက်ဖွဲ့ စေချင်တဲ့.. ပစ္စည်း စာရင်းအတိုင်း ၀ယ်ပေးယုံပဲ..။ ငွေအရမ်းများရင်.. စုဝယ်ပေးကြပေါ့..။
မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ပေးတာမှာ.. ငွေသားက အကောင်းဆုံးထင်ပါကြောင်း..။
ယခုလက်ရှိ သာမာန်လူထု အနေနဲ့ကတော့ ငွေက အဆင်ပြေဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ငွေက အကုန် ဖလှယ်လို့ရပါတယ်။ ကြေးရတတ်၊ နေရာကြီးရှိအသိုင်းအ၀ိုင်းက မင်္ဂလာဆောင်တာမှာတော့ သော့တွေနဲ့ ၁ လက်မ ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ ဗူးသေးသေးလေးတွေ တွေ့ဘူးပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင် ဆိုတာ.. လူတန်းစားလည်း ကွာတယ်။
မျက်နှာ ရှိရင် တမျိုး
မျက်နှာ မရှိရင် တမျိုး
တကယ်တော့လည်း မင်္ဂလာဆောင် တလကို ၅ရက်လောက် အဖိတ်ခံရရင်တော့ လက်ဖွဲ့ရတဲ့လူ သာမန်လူတန်းစား ၀န်ထမ်းဆိုရင် ဘယ်တတ်နိုင်တော့မလဲ.. ကိုယ့်ဟာကိုတောင် အနိုင်နိုင်.. သူများ ခွဲပေးရတာလေ.. ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
သူများကိုတော့ အမျိုးမျိုးလက်ဖွဲ့တွေ ပေးခဲ့ဘူးတယ်
ဘယ်လိုမျိုးကြုံရမှာပါလိမ့် အင်း … စဉ်းစားရင်းနဲ့ စဉ်းစားရင်းနဲ့ …
ဟူးးးးးးးးးးး (ယောက္ခမ၊ ယောက်ဖ၊ ခယ်မ၊ မရီး၊ အဘိုး၊ အဘွား၊ ဦးလေး၊ ဒေါ်ဒေါ် …..)
မင်္ဂလာဆောင်ဆိုရင်က ငွေလက်ဖွဲ့တာ အဆင်ပြေဆုံးဆိုပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ လက်ဖွဲ့ရတဲ့ သူအတွက်ကြတော့ တစ်လထဲ မ၈င်္လာဆောင်ဖိတ်စာ (3/ 4) စောင်လာရင် ငွေသားလက်ဖွဲ့ဖို့ထက် အဖိုးနည်းပြီး အမြင်လှတဲ့ ပစ္စည်းကို အားကိုးတက်ကြပါတယ် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကျတော့ ငွေသားလက်ဖွဲ့များများရလေ ကောင်းလေပေါ့ ငွေဆိုတော့ ချမ်းသာသူပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်မပြေတဲ့ သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူ့မှတော့ မလိုချင်လို့ ပုံထားကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး ….:P …